Waxgaradka ka qayb galaya shirka Cadaado oo soo dhaweeyay Hanaanka shirku ku socdo – Radio Muqdisho
Waxgaradka ka qayb galaya shirka Cadaado oo soo dhaweeyay Hanaanka shirku ku socdo
Xilli magaalada Cadaado uu ka socdo shirka maamul u samaynta Mudug iyo Galgaduud ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada gobolada dhexe waxa ay soo dhaweeyeen hanaanka shirku uu ku socdo.
Qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka shirka ka qayb galaya oo maanta la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa dowlada Soomaaliya iyo guddiga farsamada ku amaanay dadaallada ay ku xoojinayaan taabagelinta shirka.
Suldaan C/casiis Cumar Daad Beyle oo ka mid ah cuqaasha shirkan ka qayb qaadanaya ayaa sheegay in beelaha daga labadan gobol ay si wanaagsan uga wada qayb qaadanayaan shirka, isagoo bogaadiyay dadaalka ay Wasaaradda arrimaha gudaha iyo Federaalku ku bixinayso taabagalinta shirka.
Sidoo kale Wasiirka Caafimaadka Galmudug Axmed Shariif Cumar Maxamuud ayaa sheegay in haatan ay socoto diyaarinta 350- qof oo noqonaya Ergada ka qeyb galaysa shirka maamul u sameynta Gobollada Mudug iyo Galgaduud, kaddib markii tiradaasi lagu heshiiyay khamiistii la soo dhaafay.
Taliska ciidanka Xoogga dalka oo qeybo cusub u magcaabay saraakiil dhowaan la dalacsiiyey “SAWIRRO”
Maxkamadda dajarada kowaad ee CQS oo xukunno dil iyo xarig ku ridday Shabaab “Dhageyso+Sawirro”